बीपीले भनेका थिए– म मरेपछि कांग्रेस एकपल्ट छिन्नभिन्न हुन्छ : कुलबहादुर गुरुङ — Himali Sanchar
नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई सभापतिको उमदेवारका लागि समर्थन गरेका नेता हुन्– कुलबहादुर गुरुङ । नेता गुरुङले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गत चैतमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा १३ औं महाधिवेशनमा सभापति पदको उमेदवारका लागि देउवालाई दिएको समर्थन लिखित रुपमै फिर्ता लिए ।
उनले नैतिकताको बन्धनबाट मुक्त हुनलाई सभापति देउवालाई गरेको समर्थन फिर्ता लिएको बताउँदै आएका छन् । सभापति देउवाले आफूले सोचेअनुसार पार्टी हितका लागि कामहरु गर्न नसकेकाले समर्थन फिर्ता लिएको नेता गुरुङको प्रष्टोक्ति रहँदै आएको छ ।
तिनै नेता गुरुङले तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनको समयमा कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालासँग नजिक रहेर पार्टीले दिएको जिम्मेवारी बहन गरेका थिए । उनी तत्कालिन राजा महेन्द्र शाहले शासन सत्ता हत्याएपछि कांग्रेसले २०१८ सालमा सुरु गरेको दोस्रो सशस्त्र क्रान्तिका बेला मुक्तिसेनाको कमाण्डरको हैसियतमा सक्रिय थिए । नेता गुरुङ दोस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट उमेदवार बनेका थिए ।
बाह्रखरी बुक्सले प्रकाशन गरेको पत्रकार जगत नेपालको ‘बीपीको विद्रोह’अहिले बजारमा चर्चा बटुलिरहेको छ । पत्रकार नेपालको पुस्तकमा उल्लेख भए झै नेता गुरुङका नजरमा बीपी कोइराला के साच्चै विद्रोही थिए ? बाह्रखरीका केशव सावदले नेता गुरुङसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
तपाईंको नजरमा बीपी कोइराला कस्तो प्रकारको ‘विद्रोही’ हो ?
बीपी विद्रोही नै होइनन्, अनि विद्रोही पनि हुन् । किन भने उनले जति विद्रोहको कुराहरु गरे, ति विद्रोह के को निम्ति गरे ? समाधानको निम्ति । हरेक कुराको समाधान यसरी गर्नु पर्छ भनेर भनेको हो, अब त्यसलाई हामीले विद्रोह पनि भन्न सक्छौं, समाधानको बाटो खोजेको पनि भन्न सक्छौं ।
र उनले विद्रोह जुन ढंगले सुरु गरेका थिए, सुरु गरेको विद्रोहहरु अब आज हामीहरु विद्रोह भन्छौं तर त्यो विद्रोह थिएन, समाधानको बाटो थियो त्यो त । तर त्यो एक किसिमले विद्रोह भयो । आज हामीहरुलाई उनले जुुन बाटो देखाएर विद्रोह गरे । त्यो विद्रोहले हामीलाई विद्रोही बनाउन सकेको छ । तर त्यसमा जुन समाधानको बाटोमा जानुपर्थ्यो भनिएको छ नि, त्यहाँ भने गएका छैनौ हामीहरु ।
किन भने उनले राजाको विरुद्धमा संघर्ष गरे तर राजाको विद्रोही थिएनन् उनी । म राजतन्त्र चै चाहन्छु है, किन भने राजा रहेन भने हामी छाडा हुन्छौं भनेका थिए । तर राजालाई डिक्टेटर होइन, राजा प्रजातन्त्रवादी हुनुपर्छ भनेका थिए । त्यो सम्बन्धमा हामीले बीपीलाई विद्रोही मात्रै भन्यो भने हामीले उनलाई अनादर गरेको ठहर गर्छ ।
के अहिलेको नेपाली कांग्रेस बीपीले कल्पना गरेको बाटोमा हिँडेको छ ?
अब त्यो बाटोमा हिँडको छ कि छैन भन्ने कुरा पत्रकारहरुले समालोचना गरेर भन्नु पर्ने हो । म बीपीको अनुयायी हुँ, त्यसकारण मैले भनेको कुरा कि एकलकाँटे हुन्छ, कि विद्रोही हुन्छ । तर यो समाजले त्यसलाई अथवा समाजमा बसेको जो बुद्धिजीबीहरु छन् । उनीहरुले बीपीले कुन बाटोमा जानुपर्छ भनेर उनले भनेको कुरा लिइराखेका छन ? हो त्यसमा हिँडेको छ भने हामी समाधानको बाटोमा छौं, छैनौं भने छैनौ ।
तपाईंले अहिलेको कांग्रेस बीपीले देखाएको मार्गबाट बिचलित छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
कांग्रेस बीपीको बाटोमा हिँडेको छैन नै हो । मैले आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि नै केन्द्रीय समितिको बैठकमै भनेको छु कि म कांग्रेसको नाताले कांग्रेसहरु खोज्दैछु कांग्रेसहरुकै बीचमा । मैले त्यसबेला नै भनिसकेको छु । कांग्रेस आफ्नो बाटो छोड्दैछ है भनेर ।
र यो भन्दा अगाडिको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि भनेको थिएँ, हामी पैसाको भरमा राजनीति गर्दैछौं । तर बीपीले पैसाको भरमा राजनीति गरेनन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको मेम्बरहरु (सदस्य) पैसामा तानिन्छन्, एमपीहरु (संसद सदस्य) पैसामा तानिन्छन् । बीपीले पैसामा कहिल्यै ताने होलान ? गणेशमानजीले कहिल्यै ताने होलान ?
हो त्यसले गर्दा यो स्पष्ट छ, सबैले भनेका छन्, मैले मात्रै होइनन् नि । त्यसले गर्दा हामी बीपीको बाटोमा छैनौं । मैले बाटो छा्ड्न हुँदैन है भन्दै आएको छु ।
नेपाली कांग्रेसलाई त्यो बाटोमा हिँडाउने उपाय के हुन सक्छ त ? कस्तो पहल भैरहेको छ ?
होइन मैले भनिहाले नि कांग्रेसले बीपीले देखाएको बाटो कांग्रेसले नै छाड्दै गएको छ । र कांग्रेसहरु बाटोमा आउनुपर्छ भनि पनि राखैकै छौं । तर मेरो भनाइ एकदम गलत भएर गइराखेको छ । बीपीले त्यसबेला नै भनेका थिए– म मरेपछि पार्टी एकपल्ट छिन्नभिन्न हुन्छ । तर गाउँ गाउँमा कांग्रेस छ भने यो देशमा फेरि कांग्रेस जन्मिन्छ, यो देशमा कांग्रेस आउँछ है । उनको त्यो भनाइमा म भने आश्वस्त छु । बाह्रखरीबाट